Rahoviana no mividy tapakila fiaramanidina | Vaovao momba ny dia
Rahoviana no mividy tapakila fiaramanidina
Maria | | soso-kevitra, Tsangatsangana
Isika rehetra dia tia manao dia lavitra, indrindra raha mahita bidy sy vola kely isika. Rehefa manomana fialan-tsasatra ho an'ny rehetra ianao dia zava-dehibe ny mividy tapakila fiaramanidina mora vidy satria izay tantintsika hitehirizana azy dia azo ampiasaina amin'ny lafiny hafa amin'ny dia toy ny fitsangatsanganana, trano fisakafoanana, famandrihana trano fandraisam-bahiny na koa fanofana fiara hitety ny toerana haleha. .
Mba hividianana tapakila fiaramanidina amin'ny vidiny tsara indrindra dia misy paikady maromaro azo tanterahina. Raha te hahafantatra ianao amin'ny fotoana mety indrindra hamandrihana ny tapakilan'ny tapakilanay, dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
1 Mahaiza mandanjalanja
2 Mahaiza mamorona
3 Mamandraha mialoha
4 Vanim-potoana ambany sy avo
5 Miverina misaraka tapakila
6 Andro sy fotoana fivezivezena mora vidy
7 Hadihadio tsara
8 Ampandehano ny fanairana mailaka
Ny scenario tsara indrindra hitehirizana vola dia ny manararaotra ny manovaova ny dia raha tsy manana daty voafaritra hanidina ianao. Amin'ny fisafidianana daty marefo dia azonao atao ny mamonjy kely ny saran-dalan'ny sidina.
Ohatra, raha tokony handray fiaramanidina mivantana izay ho lafo kokoa, azonao atao ny manandrana manatona toerana iray izay eo amin'ny manodidina anao ary mampitaha raha toa ka lafo kokoa ny vidin'ny tapakila. Amin'ity tranga ity dia afaka mandeha dia lavitra ianao avy eo ary misy aza fomba fitaterana hafa toy ny lamasinina hahatongavana any amin'ny tanàna itodihanao.
Taloha isika dia tsy maintsy niandry hatramin'ny ora farany mba hividianana tapakila fiaramanidina mora vidy rehefa nanandrana nanala seza foana ireo kaompaniam-pitaterana. Na izany aza, marobe ireo orinasam-piaramanidina lafo vidy na mpandeha raharaham-barotra vonona handany vola bebe kokoa ho an'ny fampiononana an'ity kilasy ity, ka niova ny toe-javatra ary vokatr'izany dia vao maika lava ny famandrihana sidina tsara kokoa.
Amin'io lafiny io, ho an'ny sidina lavitra dia sahabo ho 2 volana mialoha dia ampy, raha ho an'ny sidina lavitra dia ilaina ny famandrihana tapakila 6 na 7 volana mialoha.
Vanim-potoana ambany sy avo
Raha manana fotoana mety hivezivezena amin'ny vanim-potoana ambany ianao dia araraoty fa mora kokoa ny tapakilan'ny fiaramanidina. Toy izany koa no mitranga amin'ny andro amin'ny herinandro satria mora kokoa ny mandeha mandritra ny herinandro noho ny amin'ny faran'ny herinandro.
Na izany aza, raha mila mandeha amin'ny fahavaratra na amin'ny Krismasy ianao, izany hoe amin'ny vanim-potoana avo dia be dia be ny olona izay handeha ihany koa amin'ny vanim-potoana iray ihany, noho izany dia tsara ny manomana mialoha ny fialan-tsasatrao. Ho an'ny dia iraisam-pirenena, tsara ho an'ny 6 volana sy ho an'ny zom-pirenena 3 volana. Raha miovaova koa ianao amin'ny fandaharam-potoana sy ny toerana dia ho mora ny miady varotra.
Miverina misaraka tapakila
Ny iray amin'ireo fisalasalana koa izay mipoitra amin'ny fotoana hividianana ny tapakilan'ny fiaramanidina dia ny fomba famandrihana ny hevitra sy ny fiverenana ary ny fanaovana azy ho mora kokoa. Indraindray ny fividianana tapakila mandroso amin'ny zotram-piaramanidina samihafa fa tsy ilay iray dia mety ho mora vidy kokoa.
Miaraka amin'ity fikafika ity, ankoatry ny fahafaha-mivoatra kokoa hody any an-trano rehefa tianao izany ary na dia avy amin'ny seranam-piara-manidina hafa aza ianao dia hanangona vola bebe kokoa azonao omena amin'ny zavatra hafa.
Andro sy fotoana fivezivezena mora vidy
Araka ny fanadihadiana maromaro, ny andro mora indrindra hividianana tapakila fiaramanidina ho an'ny sidina anatiny sy iraisam-pirenena dia ny talata, alarobia ary alakamisy ihany koa. Ankoatr'izay, ny ora antoandro ahafahantsika mahazo ny vidiny mora indrindra dia ny ora fisakafoanana antoandro (manomboka amin'ny 14:15 ka hatramin'ny XNUMX:XNUMX hariva).
Raha tsy mahita tolotra tsy hay tohaina ianao izay tsy azo hatsaraina, raha ny fahitana tambim-bidy toy ny dia farany dia tena ilaina tokoa ny mandany fotoana hikarohana sy hanaovana fikarohana tsara. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fanaovana azy na ny fisafidianana ny tolotra voalohany hitantsika dia mety hidika hoe very vola be na, ny mifanohitra amin'izany no mitahiry azy.
Ampandehano ny fanairana mailaka
Misoratra anarana ho an'ny taratasim-baovao avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka samihafa mba hampandrenesina ny momba ny tolotra androany, làlana vaovao misy zotra fampisehoana manokana, na vidiny mora amin'ny sidina minitra farany amin'ny alàlan'ny mailaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Rahoviana no mividy tapakila fiaramanidina
Inona no hatao any Dresden
Inona no ho hitanao ao amin'ny Logroño